प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यकै बाटोले सास्ती – Highlights Tourism
मनाङ । हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङका बासिन्दालाई नेपालको राजधानी र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पुग्न धेरै कठिन छ। जिल्लाबाहिर आवतजावत र सामग्री ढुवानी गर्ने मनाङवासीको यही एउटै सडक न हिउँदमा र नत वर्षायाममा नै सुरक्षित र सहज छ ।
हिउँद याममा हिउँ पर्ने भएकोले विकासका काम गर्न सकिँदैन भने वर्षामा पहिरोका कारण सडक निर्माण या अरु कुनै निर्माणसम्बन्धीकाम गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । मनाङवासी वर्षायाममा यो बाटो हिँड्दा कतिबेला कहाँबाट पहिरो आएर पुर्ने हो भन्ने त्रासले पहरोतिर हेर्दैभगवान पुकारेर यात्रा गर्न विवस छन् । सधैँ यस्तै जोखिममा यात्रा गरिरहेका उनीहरुलाई त बानी परिसकेको छ तर यहाँ जाने आन्तरिकतथा बाह्य पर्यटकलाई भने सास्ती नै हुने गरेको छ ।
यहाँका बासिन्दा सधैँ सडक सहज बन्ने आशामा हुन्छन् तर वर्षेनी यो आशा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । यो वर्ष सडक सञ्जालविस्तार हुन्छ अनि सहज यात्रा गरौंला भनेर बसेका उनीहरु सडक नबन्दा जोखिममै यात्रा गर्न बाध्य छन् । हिउँदमा हिउँ परेर माटो भेट्नसमेत सकिदैन र काम गर्न मुस्किल भएको भन्छन् निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनी । यता वर्षा लाग्नासाथ पहिरोको जोखिम बढ्छ ।मनाङबाट अर्को जिल्लासम्म पुग्न पनि यही एउटै सडक छ तर लामो समयसम्म पनि यो सहज हुन सकेको छैन । यसकारण पनिमनाङवासीले आफूहरुलाई सधैँ छुट्टै देशको जस्तो व्यवहार भएको जस्तो लाग्ने गरेको दुखेसो पोख्ने गरेका छन् ।
बेँसीशहर– चामे ६५ किलोमिटर सडकमध्ये लमजुङतर्फ ३५ र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर पर्दछ । मनाङबासीको जिल्लाबाहिर निस्किनेएकमात्र निकास यही हो । तर यो बाटोमा बाह्रैमास असुरक्षाको घण्टी बजिरहेको हुन्छ । कोही व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेमा मनाङवासीउपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्थाका लागि पनि पहिरोले समस्या पार्ने गरेको छ । अहिले त झन् कोभिड १९ को सङ्क्रमणफैलिइरहेकोले यहाँका बासिन्दा थप तर्सिएका छन् । मनाङमा पनि सङ्क्रमण देखिई सकेकाले स्वाब नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणकालागि गण्डकी प्रदेशस्थित प्रयोगशाला पठाउन बाटोका कारण कठिन छ । यस्तो महामारी र वर्षाको समयमा त्रासमा यात्रा गर्नुपर्नेअवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज अधिकारीले बताए ।
‘‘सरकारले मनाङवासीलाई सहज सडकको पहुँचमा पुर्याउने हो भने छुट्टै देश हो जस्तो लाग्ने थिएन,’’ उनीहरु भन्छन्, ‘‘हामीलाईसरकारले पनि जोड्न चाहेन जस्तो लाग्छ ।’’ पूर्खाहरुको त हिँडेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिलेको युगमापनि त्यसैगरी यात्रा गर्न बाध्य भएकोमा उनीहरुको दुखेसो छ ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । त्यसमाथि कोभिड १९ को सङ्क्रमण फैलिएको छ । मनसुनसँगै कोभिडकोसामना गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा पहिरोको कारण मनाङवासीको स्वाब नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्यनिर्देशनालय पोखरा पठाउन समेत समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । चामे–बेशीसहर सडकखण्ड सुचारु भएपनि कोभिडपरीक्षण गर्न पठाउन भने कतिबेला पहिरो खस्छ कि भन्दै त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख बद्रीआचार्यले बताए ।
‘‘वर्षा सुरु हुनासाथ माथिबाट पहिरो खस्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा मनाङवासील रोग फैलिँदा समेत स्वाब पुर्याउन नसकिने हो किभन्ने चिन्तामा परेका छन् । त्यसै त स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट ढिला गरी आउने गरेको छ त्यसैमा पनि वर्षात्को समयमा यस्तै समस्याले झन्सताउँछ,’’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘‘अहिले पहिरो हटाएर सडक सुचारु भएपनि कतिबेला फेरि पहिरो झर्छ भन्ने त्रासले सताउँछ, पहिरोलेखसिराख्ने हो भने त मनाङवासीको कोरोना परीक्षण मात्रै नभई सङ्क्रमण फैलियो भने पनि स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन नसकिने होभन्ने मनमा डर बढेको छ ।’’
विसं २०५९ मा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेर मनाङवासीलाई सहज बनाए पनि अहिलेसम्म ट्रयाकलाई सहज सडक बनाउन भनेसरकारको सक्रियता देखिएको छैन । यसरी वर्षामा बाढी, पहिरो र हिउँदमा हिमपातले मनाङको सडकको समस्या कहिले समाधान हुनेहो पत्तो छैन ।
नासोँ गाउँपालिका–१ तालका स्थानीय राजु गुरुङले हिउँदमा हिमपात, गर्मीमा वर्षाले पहिरो खस्ने गरेकोले बिरामी परेर उपचारमा जानसमेत समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । ‘‘सबै खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा अरु जिल्लाबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, पक्की सडक नभएकोलेकहिले बाढी पहिरो त कहिले हिमपातले गर्दा सधैँ समस्या आउँछ,’’ गुरुङ भन्छन् ।
मनाङको माथिल्लो मनाङ पुग्न अझै समस्या छ । कहीँ पहाडलाई फोडर सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ भने कहीँ चट्टानलाईफोडिएको छ । तर चट्टानमा भन्दा पनि डरलाग्दो रहेको कुरा त पहाडबाट खस्ने सुख्खा पहिरो हुन्छ । हावाहुरी बढ्नासाथ यात्राकै क्रममाडाँडाबाट पहिरो खस्ने समस्या छ । त्यसैमाथि काठको पुलको सहारामा नदी पार गर्नुपर्ने समस्या छ ।
निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर थप गर्दा समेत सडक सञ्जाललाई जोड्ने पुलको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । मनाङकापाँचवटा पुलले जोडेको छ । तर अहिलेसम्म एउटा बाहेक अन्य पुल निर्माणको प्रक्रियामा समेत पुग्न सकेको छैन । ‘‘कतिबेला काठकोपुल गलेर दुर्घटना हुने हो भन्ने यकिन समेत गर्न सकिँदैन, हिउँदमा हिमपात र वर्षामा बाढी पहिरोले गर्दा ढुवानीका सामग्री बीचैमा हुन्छन्,’’ स्थानीय अरुण गुरुङ भन्छन् ।
लमजुङ र मनाङको सिमानामा रहेको म्यार्दी खोलाको पुल, नासोँ गाउँपालिका र चामे गाउँपालिका जोड्ने तिमाङ खोलाको पुल, मनाङङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने सब्जे खोला, पिसाङ खोला र ङावल र हुम्डे जोड्ने मस्र्याङदी नदीको पुल रहेका छन् । पाँच वटा पुलनिर्माणका लागि मात्रै रु.२२ करोड बजेट विनियोजन गरेको क्याराभान कन्सल्टेन्सीका सब इन्जिनियर कृष्ण महतले बताए । उनकाअनुसार अहिलेसम्म एउटा पुल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । मनाङमा हिउदमा हिमपात र वर्षायाममा बाढी पहिरोले सामग्री ढुवानीपनि गर्न सक्ने अवस्था नहुने महतले बताए ।
सडक सञ्जालको राम्रो विस्तार नहुँदा पर्यटकलाई पनि सास्ती हुने गरेको छ । प्याकेजको रुपमा भ्रमणमा निस्कने पर्यटकलाई सडकसहज नहुँदा समयमा घुमेर फर्किन नसक्ने अवस्था आइलाग्ने गुनासो गर्ने गर्छन् । पदमार्ग र सडक सञ्जाल एउटै हुँदा समेत पर्यटकलाईसमस्या पर्ने गरेको छ ।
स्वदेशी पर्यटकहरु सवारीसाधानको प्रयोगमार्फत निश्चित समयका लागि भ्रमणमा निस्कने भएपनि सडकको सहज वातावरण नहुँदासमयमा नपुग्ने र हिमपातमा सवारी समेत गुड्न सक्ने अवस्था छैन ।
आन्तरिक पर्यटकले सवारीसाधन प्रयोग गरी छोटो समयमा घुम्न आउने भएपनि बाह्य पर्यटक पदमार्गको प्रयोग बढी गर्ने गरेका छन् ।सडक मार्ग र पदमार्ग एउटै हुँदा पर्यटकलाई समस्या सिर्जना गरेको छ । बेँसीसहरदेखि च्याम्चेसम्म सडकमार्फत् नै पदयात्रा गर्ने गरेकाछन् भने च्याम्चेदेखि धारापानीसम्म सडक सञ्जाल र पदमार्ग छुट्टै रहेको छ । धारापानीदेखि भने मनाङका विभिन्न भागमा पुग्नेपर्यटकहरु यही सडकबाटै पदयात्रा गर्ने गरेका छन् । यो सडकमा जोखिम र धुलो धेरै छ तर पनि उनीहरु पदयात्राका लागि बाध्य छन् ।
सडक सञ्जालको विस्तार राम्रो नहुँदा आवश्यक परेका सामग्री समेत ल्याउन मुस्किल परेको छ । होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागिखाद्यान्न बाहेक प्रायः बाह्य पर्यटकले मन पराउने वस्तुहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि सडकले सहज नभएको उनीहरुको भनाई छ । सडकसञ्जाल होटल व्यवसायीसँग बढी मात्रामा जोडिनुका साथै प्रभावित पनि उनीहरु नै छन् । सामान सकिनासाथ सहजै बजार पुगेर सामानल्याउने वातावरण समेत नहुँदा सधैँ समस्यामा परेको होटल व्यवसायी विनोद गुरुङले बताए । ‘‘कुनै समयमा त सामान ल्याउदै गर्दाबाटोमै रोकिन्छ, कहीँ पुलको समस्या त कतै सुख्खा पहिरोको, मनाङवासी सधैं समस्यामै जिउन बाध्य छन्,’ गुरुङले भने ।
सडक सञ्जालले जोडिएपछि भने मनाङमा ठूलो सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक भित्रने गरेका छन् । स्वदेशी पर्यटकहरु छोटो समयकालागि भएपनि घुम्नका लागि मनाङ आउने क्रम भने बढ्दो छ । तर अझ सडक सहज हुने भए पर्यटकको आकर्षण बढ्ने मनाङवासीकोभनाई छ ।
मनाङमा पर्यटक मुख्यतः अन्नपूर्ण गन्तव्य रहेको यस पदमार्गमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्दछन् । यहाँ आउने पर्यटकहरुनजिकबाट अग्ला अग्ला हिमश्रृंखलाको अवलोकन, विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल (४९१९मि.), थोराङ्ला भञ्ज्याङ पास(५४१६ मि.) पार गरी धार्मिक महत्वको तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर निस्कने गरेका छन् । विशेषगरी यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिकपरम्परा, भेषभूषा तथा चाडपर्वहरु पर्यटकका आकर्षण हुन् ।
यहाँ माघको दोस्रो साताबाट सुरु भएर असारको पहिलो हप्तासम्म गरी मुख्यतः दुई याममा पर्यटक आउने गर्दछन् । भदौको दोस्रोसाताबाट मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म यहाँ पर्यटक आउने गर्दछन् । सन् २०१८ मा ३० हजार एक सय पर्यटक भित्रिएका थिए भने सन्२०१९ मा २९ हजार पर्यटक भित्रिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङले जनाएको छ । बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क राख्ने गरिए पनि स्वदेशीपर्यटकको तथ्याङ्क भने राख्ने गरिएको छैन । विगत वर्षमा १२ हजारभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटक भित्रिएको आंकलन गरिएको छ ।आन्तरिक पर्यटकहरु खासगरी लामो बिदा परेका बेला जस्तै दशैं, तिहारलगायतका समयमा घुम्न आउने गरेका छन् । विशेषगरीविद्यार्थी, कर्मचारीलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरु यहाँ आउने गरेका छन् ।
पहिले हिँडेरै यात्रा गर्दा मनाङ ङिस्याङबाट लमजुङको सदरमुकाम बेंसीसहर पुग्न दुई दिन लाग्ने गर्दथ्यो । मनाङको चामे हुँदै तिमाङ, धारापानी, ताल, च्याम्चेमा बास बस्ने गरिन्थ्यो । च्याम्चे हुँदै जगत, घेर्मु, बाहुनडाँडा, खुदी निस्कने र बेँसीसहर पुग्ने गरिएको थियो ।अहिले सडक बनेपछि भने एकै दिनमा मनाङ पुग्नसक्ने भएपनि बाढी पहिरो, हिमपातले गर्दा सहज अवस्था भने छैन । स्थानीय ८२ वर्षीययाङ्डुङ गुरुङ भन्नुहुन्छ “हामीले चौँरी गोठमा बस्दै हिमाली भेग र लेकका जडीबुटीहरु सङ्कलन गर्ने गथ्र्यौ । यार्सा, निरमसी, वनलसुन, पाँचऔँले, जिम्बुलगायतका जडीबुटी सङ्कलन गरी जाडो बढ्न थालेपछि बेँसी झर्ने चलन थियो । लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, कास्की, काठमाडौँलगायतका ठाउँमा पुगेर यी जडिबुटीसँग चालम या अरु अन्न साटेर घर फर्किने गथ्र्यौँ ।”
Previous article चौध अन्तरराष्ट्रिय उडान: बाह्र सय नेपाली स्वदेश फिर्ता
Next article कोञ्ज्योसोममा तामाङ सांस्कृतिक ग्राम बनाइने
सोमबारदेखि फेरी झरी पर्ने
भदौ १ देखि उडान खुल्ने
हवाई उडान नियमित गर्न पर्यटन व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । सरकारले बन्दाबन्दी अन्त्य गर्ने पूर्व निर्धारित समयाबधीलाई परिमार्जन गरेके छ । …